शिर्ष नेता गिरफ्तार परेको २४ घण्टा नबित्दै विप्लवले गरे यस्तो निर्णय, अब के गर्ला ओली सरकार ? — Sanchar Kendra
शिर्ष नेता गिरफ्तार परेको २४ घण्टा नबित्दै विप्लवले गरे यस्तो निर्णय, अब के गर्ला ओली सरकार ?
काठमाडौँ । बिद्रोही नेपाल कमन्युष्ट पार्टी नेकपाका शिर्ष नेता गिरफ्तार परेको २४ घण्टा नबित्दै महासचिव विप्लवले कडा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । बिद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ओली सरकारको ज्यादति र दमनविरुद्ध माघ १० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । उक्त पार्टीले आफ्ना केन्द्रीय समिति सचिवालयका सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ को गिरफ्तारीविरुद्ध यही माघ १० गते नेपाल बन्द घोषणा गरेको हो ।